Somalia:Khudbaddii Ra’iisul-wasaaraha cusub Prof. Cabdiwali uu ka jeediyay Baarlamaanka – Akhri | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > News, SOMALI NEWS, Somali Prime Minister Prof. Abdiweli, WARARKA	> Somalia:Khudbaddii Ra’iisul-wasaaraha cusub Prof. Cabdiwali uu ka jeediyay Baarlamaanka – Akhri
(Muqdisho, Talaado 28 June 2011): Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Dr Abdiweli Mohamed Ali ayaa maanta hortagey golaha baarlamaanka si loo ansaxiyo. Golaha Baarlamaanka ayaa cod u qaaday ansixinta Ra’iisul Wasaaraha cusub, waxaana ansaxiyey 437 xildhibaan, halka ay 2 xildhibaan diideen, 4 xildhibaanna ay ka aamuseen. Baarlamaanka waxaa soo xaadiray 443 xildhibaan. Ra’iisul Wasaaraha ayaa halkaas ka jeediyey khudbad taabaneysa dhinacyo badan.
Khudbadii Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ka jeediyey Golaha Baarlamaanka
Mudane Sheikh Sharif Sheikh Ahmed,
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Mudane Sharif Hassan Sheikh Aden,
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya.
Dhammaantiin A Slaamu Caleykum Waraxmatullah Wa barakat.
Waxaa hubaal ah in mudada noo dhiman nalooga wada baahanyahay inaan si wadajir ah waddanka ugu wada adeegno, isla markaana aan labo jibaarno dadaaladeena ku wajahan sidii aan amniga u soo celin laheyn, isla markaana u dhameystiri laheyn howlaha muhiimka ah ee nawada horyaalla, sida dhameystirka dastuurka qabyada ah iyo ka gudubka xilliga KMG ah.
Xildhibaanada sharafta leh, waxaan si xushmad leh idiin kaga codsanayaa inaad maanta i siisaan kalsoonidiina, si aan u guda-galo una dar-dargeliyo howlaha muhiimka ah ee na wada sugaya. Marka aad i siisaan kalsoonidiina buuxda, waxaan ku dhaqaaqi doonaa la tashiyo aan la sameeyo dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed oo ay ugu horreeyaan mudanayaasha baarlamaanka sharafta leh si aan u soo xulo shaqsiyaadka ku habboon inay ka mid noqdaan golaha wasiirada si ay gacan buuxda nooga wada siiyaan u adeegida shacabka soomaaliyeed.
Sidoo kale waxaan la tashiyo ka dib idiin soo bandhigi doonaa barnaamijka Xukuumadda iyo xubnaha golaha wasiirada si aad uga doodaan, isla markaana aad uga gudataan waajibaadkiina dastuuriga ah.
Xildhibaanada sharafta leh.
La dagaalanka kooxaha argagaxisada ee diidan dowladnimada iyo burcad-badeeda.
Dhameystirka howlaha muhiimka ah ee uu axdiga FKMG ah na farayo oo ay ka mid yihiin:
Dhameystirka dastuurka qabyada ah, iyo ka gudubka xilliga KMG ah,Dowlad wanaaga, dib-u-heshiisiin qaran oo taam ah, howlgelinta iyo dhismaha hay’adaha dowliga ah,
Toosinta maamulka dhaqaalaha;La dagaalanka musuq-maasuqa;
Xoojinta xiriirka bulshada caalamka.
Waxaa hubaal ah in xaaladda dalku marayo inay tahay mid khatar ah oo u baahan inaan u wada istaagno. Shacabkii soomaaliyeed waxaa isagu darsoomay, dagaalo joogta ah, abaaro dabo dheeraaday, macluul, argagaxiso, burcad badeed, gaajo iyo iyadoo in badan oo ka mid ah laga hor-istaagay gar-gaarkii ban’aadanimo. Waxaa sidoo kale bur-buray dhammaan hay’adihii adeega ee qaranka isla markaana ummadda wax u qaban lahaa.
Waqtiga aan heysano aad buu u yar-yahay, mashquulka aan ku nahay soo celinta amniga iyo la dagaalanka kooxaha argagaxisada ah waxey keentay in dhammaan Xukuumadihii naga horreeyeyba aysan waqti u helin in ay xoojiyaan xiriirka Dowladda Dhexe iyo maamulada dalka ka jira.
Sidaas daraadeed, waxaan ku dadaali doonaa sidii aan xiriirkaas dib-ugu soo nooleyn lahaa oo aan u saari lahaa waxii mugdi iyo kala aragti duwanaan ah ee jira.
Ugu danbeyntii, waxaan halkan uga mahadcelinayaa Madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo iigu aaminay xilkan Qaran ee culus, anigana waxaan hortiina ka ballanqaadayaa inaan u gudan doono si waafaqsan diinta Islaamka iyo dhammaan shuruucda u degsan dalka, dhowri doonana Axdiga FKMG ah.
Waxaan kaloo aan hortiina ku ballanqaadayaa inaan xoojin doono xiriirka wada-shaqeynta dhammaan hay’adaha dastuuriga ah iyo xiriirka beesha caalamka.
Sidoo kale idinkana waxaan idinka codsanayaa inaan mudada yar ee aan heysanno aan ka wada shaqeyno sidii aan si wadajir ah isaga wada kaashan laheyn dhan walba, innagoo eegeyna danta guud ee shacabka soomaaliyeed.
Waxaan mar kale ku celinayaa in aan xoojin doono xiriirka Baarlamaanka iyo Xukuumadda.
Mahad ballaaran ayaan mar kale idiin soo jeedinayaa.
Japan:TEPCO’s water decontamination plan Russia:Moscow doesn’t want the Libyan scenario in Syria – Mikhail Margelov